ट्रेडिंग रोबोट • सुन, तेल, फोरेक्स र क्रिप्टो • टेस्ट र समीक्षा
ट्रेडिंग बट्स र क्रिप्टोबोट्स
ट्रेडिंग कम्पनीहरूको व्यापार मोडलले लगानीकर्ताहरूलाई मुद्रा, वस्तुहरू, बहुमूल्य धातुहरू र क्रिप्टो मुद्राको वित्तीय बजारमा भाग लिने अवसर प्रदान गर्दछ। प्रस्तावमा ट्रेडिंग रोबोटको साथ तपाईलाई फाइनान्स वा आईटी विकासमा कुनै अनुभव वा सीपको आवश्यकता पर्दैन। त्यसोभए ट्रेडि al एल्गोरिदमलाई तपाईंको पूंजीको बुद्धिमत्ता र होशियारीपूर्वक ध्यान दिनुहोस्, हामीले तिनीहरूलाई त्यसको लागि चयन गरेका छौं।
दयाबाट, म तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्नेछु र तपाईंका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछु, तर ध्यान राख्नुहोस् कि हानिको जोखिम पनि संचित लाभ जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले गुमाउन तयार भएको रकम मात्र लगानी गर्नुहोस्। प्रस्तावित रोबोटहरूलाई तिनीहरूको रणनीति बुझ्नको लागि सानो प्रारम्भिक पूंजीको साथ सुरु गर्नुहोस् र परीक्षण गर्नुहोस्।
विवेकपूर्ण लगानी गरेर स्वचालित निष्क्रिय आय उत्पन्न गर्नुहोस्।
लगभग गर्न को लागी केहि छैन!
साइन अप गर्नुहोस्, तपाईंको रकम जम्मा गर्नुहोस् र रोबोटहरू तपाईंको लागि ट्रेड गर्नुहोस्।
तपाईंको आय नियमित रूपमा संकलन गर्नुहोस् र तपाईंको सबै कोषहरू सबै समयमा।
व्यापार रोबोट र वित्तीय अवसरहरू
ट्रेडिंग रोबोटहरू धेरै महिनासम्म परीक्षण गरियो, भरपर्दो र कुशल
व्यापार विशेषज्ञहरूको विशेषाधिकार हुन बन्द भएकोले, व्यापारिक रोबोटहरूले इन्टरनेटमा आक्रमण गरेका छन् र व्यक्तिहरूको लागि आर्थिक लाभहरू उत्पन्न गर्न सक्छन्। यी रोबोटहरू तिनीहरूका प्रयोगकर्ताहरूको तर्फबाट, तिनीहरूको बहुमूल्य समय बचत गर्दै स्वचालित रूपमा व्यापारको लागि लोकप्रिय भएका छन्। यस विषयमा धेरै घोटालाहरू भएकाले, हामी परीक्षण गर्छौं, विश्लेषण गर्छौं र केही ट्रेडिंग बटहरूलाई अरू भन्दा बढी सल्लाह दिन्छौं।
यो XAU / अमेरीकी जोडी कम जोखिम प्रबन्धन र छोटो अवधिको स्केलपिंग रणनीतिको साथ व्यापार गर्न डिजाइन गरिएको हो। Scalping सुन बजार को लागी समर्पित।
धेरै उच्च बजार अस्थिरता संग क्रिप्टोकरेन्सी बजार र मुख्यतया Bitecoin BTC व्यापार गर्न डिजाइन गरिएको।
✅ अटोट्रेड क्रिप्टो
२०१९ मा उपलब्ध छ
अटोट्रेड फोरेक्स एक इन्डोनेसियाको मुद्रा बजारमा आधारित ट्रेडिंग रोबोट हो। अटोट्रेड फोरेक्स २०२१ को गर्मीमा उपलब्ध हुनेछ।
यो तेल बजार व्यापार गर्न डिजाइन गरिएको छ। अटोट्रेड तेलले ब्यारेल वा तलको ब्यारेलको मूल्यमा निर्भर गर्दछ।
Fin 888 एक इन्डोनेसियाली व्यापारिक रोबोट फिएट मुद्रा व्यापार मा आधारित छ। Fin888 एक स्थिर रोबोट थियो तर भन्दा कम कुशलAutotrade Gold.
API मा लिङ्क गरिएको क्रिप्टोमा 18 सहित2रोबोटहरूको इकोसिस्टम Binance। अन्य बटहरू लिङ्क हुनेछन् broker विनियमित इक्विटी।
EUR / USD जोडी व्यापार गर्न डिजाइन गरिएको, को सञ्चालन को प्राथमिक मोड SmartXBot छोटो स्थिति को प्रवृत्ति र व्यापार मा आधारित छ। ATG भन्दा कम कुशल।
Smartxbot / नेट 89
कुकोइन क्रिप्टो रोबोटहरू
सबै भन्दा राम्रो एक्सचेन्जहरू मध्ये एकले वांछित मुद्रा जोडीहरू अनुसार4रोबोट रणनीतिहरू प्रदान गर्दछ।
✅ कुकोइन बट्स
Fiat मुद्रा, स्थानान्तरण वा क्रिप्टो मा भुक्तानी संग सुन र हीरा किन्न को लागी प्रणाली।
इन्डोनेसियाली व्यापार रोबोट सुन बजार व्यापार। नाफा बाँडफाँड प्रणाली जस्तै Smartxbot.
इन्डोनेसियाली व्यापार रोबोट मा क्रिप्टो बजार व्यापार broker लोटस इन्टरनेशनल।
विदेशी मुद्रा बजार आधारित ट्रेडिंग रोबोट।
EUR / USD जोडी व्यापार गर्न डिजाइन गरिएको, Coved एक कृत्रिम बुद्धिमता र सबै भन्दा उन्नत जोखिम प्रबन्धन टेक्नोलोजीको साथ एक उत्तम सफ्टवेयर हो।
यो EUR / USD जोडी कम जोखिम व्यवस्थापन र एक छोटो अवधि scalping रणनीति संग व्यापार गर्न डिजाइन गरिएको छ।
बहु मुद्रा जोडीहरू व्यापार गर्न डिजाइन गरिएको, एलिट्रोबले निरन्तर विदेशी मुद्रा बजार विश्लेषण गर्दछ, प्रमुख संस्थागत स्तर र उच्च ट्रेडिंग सम्भावनाको साथ क्षेत्रहरू खोज्दै।
यो Scalping र दिन ट्रेडिंग रणनीति अन्तर्गत बहु जोडी मुद्राहरू र क्रिप्टो व्यापार गर्न डिजाइन गरिएको छ।
❌ बिट रोबोट
विज्ञापन-आधारित क्यासब्याक प्रणाली।
❌ एआई मार्केटिंग
Professional रोबोटहरू खोज्नुहोस् जुन स्केलपिंग र डे ट्रेडिंग मा विशेषज्ञता १२ पेशेवर व्यापारीहरु द्वारा पर्यवेक्षण र मुख्य मौद्रिक मुद्राहरु को व्यापार।
केही व्यापारिक रोबोटहरूको अपग्रेड र निगरानी
केही लेखापरीक्षण गर्छौं ट्रेडिंग रोबोटहरू र अरूहरू हामीलाई समयसँगै भरपर्दो र दिगो जस्तो लाग्दैन। यहाँ व्यापारिक रोबोटहरूको एक गैर-विस्तृत सूची छ जुन हामी धेरै नजिकबाट पछ्याउँछौं: स्मार्ट इभो, मेस्ट्रेम, GoldMine, Pipskiller, RoyalQ, BTS, Fortune8, RoboTop, King Trader, LVBet, Algate, Alyssa, Agility, Class VIP, Ferrari, Ricabot, Vega88, Euro Miner, Millionaire Prime, Dragon, DGP Bot, Alphabet, Smartech, IQSmart, विशेष , Ninebot, ISM, Viggo, AIC Genius, Anti MC, Ximple Trade, Crown, ER, MR X999, GTA88, Jaderock 78, RX1, Pro-100, Notheory, Sun Star Indo, Infinity Gold, GBPUSD, Index Scalper, Diamond, Bibot, ISM, GatotkacaFX, ProMax, Copet ...
यी व्यापारिक रोबोटहरू (घोटालाहरू / पोन्जी) बेवास्ता गर्नुहोस्: EvoTrade, Eureka, Mark AI, King Coin, Antares, Sparta, Shigeru, King Gold, Mandaka, Voltnexo, LogicPro, Jokermoon, Tron Life, Zeppelin, HTFox, Skidn ...
उत्तम व्यापारीहरू पनि मार्केटमा आफ्नो अर्डर ट्रिगर गर्न रोबोटमा निर्भर छन्।
तिनीहरू छिटो छन्, छिटो हिसाब, र भावनाहरु रहित छन्।
स्वचालित ट्रेडिंग रोबोटहरू स्वचालित प्रणालीहरू हुन्छन् जुन व्यापारीहरूको टोलीले सेट गरेको प्यारामिटरहरू वा तालिका अनुसार कार्य गर्दछ। एक पटक तपाईंको ट्रेडिंग खातामा जडान भएपछि रोबोटले स्वचालित रूपमा वित्तीय बजारमा कुनै मानवीय हस्तक्षेप बिना स्थिति लिन्छ, जसले मानवीय भावनाहरूको कारण त्रुटिहरू हटाउँछ।
यी सफ्टवेयर एक राम्रो जोखिम / वापसी अनुपात संग, ट्रेडिंग प्रक्रिया स्वचालित र दिगो मुनाफा प्राप्त को लक्ष्य को साथ डिजाइन गरीएको छ। यी उन्नत एल्गोरिदमहरू कृत्रिम बुद्धिको साथ लगातार मार्केटको विश्लेषण गर्दछन्, स्वत: खुला र नजिक ट्रेडहरू राम्रो कोष प्रबन्धनको साथ (अधिकतम draw% ड्रडडाउन), गणितीय, सांख्यिकीय र विशिष्ट बजार सूचकहरूमा आधारित निर्देशनहरूको प्रयोग गरेर। छात्रवृत्ति धारक।
DigiPrime / Pansaka / Pantheratradeजस्तै मेटा क्यापिटलले स्वचालित व्यापारको क्षेत्रमा विभिन्न विज्ञहरूसँग धेरै साझेदारीहरू विकास गरेको छ।
लक्षित बजारको आधारमा प्रत्येक रोबोटको आफ्नै व्यापारिक रणनीति हुन्छ। तिनीहरू निरन्तर अनुगमन गरिन्छन्, आर्थिक समाचार अनुसार अपडेट हुन्छन् र पेशेवर व्यापारीहरूको टोलीद्वारा अनुकूलित हुन्छन्।
यो निरन्तर अनुकूलन प्रक्रिया सफल दीर्घकालीन परिणाम सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। विदेशी मुद्रा बजार एक धेरै तरल र लगातार परिवर्तन वातावरण हो। अप्टिमाइजेसनको यो स्तर सुनिश्चित गर्दछ कि एल्गोरिदमहरू शीर्षमा रहन्छन् र सबै कुराले जस्तै काम गर्दछ।
"यदि तपाईं ट्रेडिंग रोबोटको संसारमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, मेरो सल्लाह लिनुहोस्: पैसा चाहिंदो गर्नुहोस् शर्त लगाउनुहोस्, ट्रेडरलाई तपाईंको जीत जम्मा गर्न दिनुहोस् जब सम्म तपाईं आफ्नो सुरुवाती शर्त पाउँनुहुन्न। त्यसपछि मात्र बोनस
व्यक्तिगत वित्तीय रणनीति
कम्बो प्रयोग गर्नुहोस्
रोबोट / क्रिप्टो / स्ट्याकिंग.
सकेसम्म धेरै विविधीकरण गर्दा निष्क्रिय आय उत्पन्न गर्न लगानी रणनीतिहरू मध्ये एक यहाँ छ:
एक वा बढी ट्रेडिंग रोबोटको साथ पैसा जम्मा गरेर प्रयोग गर्नुहोस् brokerसम्बन्धित छ।
लाभको साथ, मुख्य एक्सचेन्जमा क्रिप्टो मुद्राहरू खरीद गर्नुहोस् (Binance, कोइनबेस वा Crypto.com).
व्यापार गर्नुहोस् वा तपाईंको होल्ड गर्नुहोस् cryptomonnaies मासिक चासो उत्पन्न गर्न र / वा तपाईंको क्रिप्टो जस्तै दैनिक उत्पादन र सेवाहरू किन्न Binance कार्ड खाना किनमेल, कपाल, पेट्रोल, सदस्यता र फुर्सतको लागि ...
स्थिर र कुशल ट्रेडिंग रोबोटहरू
लगानी गर्नुहोस् र विविधता ल्याउनुहोस्
ट्रेडिंग रोबोटको बारेमा बढि जान्नुहोस्
Questions प्रश्न / उत्तरहरू
किन एक ट्रेडिंग रोबोटको साथ आफ्नो लगानी विविधता?
ट्रेडिंग रोबोटमा लगानी एक बढ्दो लोकप्रिय दृष्टिकोण हो जुन धेरै लाभदायक साबित हुन सक्छ। यसैले उच्च फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंगले फ्रान्समा राखिएको अर्डरको आधा हिस्सा र संयुक्त राज्य अमेरिकामा राखिएको अर्डरको %०% ओगट्छ। यी तथ्या्कहरूले स्पष्ट रूपमा यस प्रकारको वित्तीय लगानीको प्रभावकारिता देखाउँछन्।
धेरै फाइदाहरू ट्रेडिंग रोबोटको साथ ध्यान दिएका छन्:
- सबै भन्दा पहिले, तिनीहरूले सम्पत्तिको राम्रो मूल्याङ्कन उत्पन्न गर्न सम्भव बनाउँछन्, मूल्यहरू बजारको मागसँग निरन्तर अनुकूलन हुन्छन्,
- बजार अधिक तरल, किन्न र बेच्न सजिलो हुन्छ
- ती दुबै कम्पनी र व्यक्तिहरूको लागि ट्रेडिंग लागत घटाउँछन्
कस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू आज ट्रेड रोबोटमा बढी रुचि राख्छन्?
आज, त्यहाँ धेरै प्रकारका जोखिमपूर्ण लगानीकर्ताहरू छन् जसले स्वचालित ट्रेडिंग रोबोटहरू प्रयोग गर्छन्:
मानिसहरू आफ्नो आम्दानीका स्रोतहरू विविधीकरण गर्न खोज्छन्
थप आय आर्जन गर्नको लागि अधिक र अधिक व्यक्तिहरू व्यापारमा संलग्न हुन चाहन्छन्। यस मामिलामा ट्रेडिंग रोबोटहरू एक धेरै राम्रो विकल्प हो किनभने तिनीहरूले तपाईंलाई व्यावसायिक व्यापारीहरू जस्तै धेरै सीपहरू बिना वित्तीय बजारहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिन्छ।
हामीले व्यापारिक रोबोटको प्रयोग गर्ने बढ्दो संख्यामा फेला पारेका छौं, त्यस्तै रोबोटको सम्बन्धमा जुन मैले तपाईंलाई हालको वेबसाइटमा प्रस्तुत गर्दछु। वास्तवमा, स्वचालित व्यापारलाई कम कामको आवश्यक पर्दछ जब पर्याप्त आय उत्पन्न गर्न अनुमति दिँदै। व्यापारीहरू अझै पनि गुणस्तरीय ट्रेडिंग रोबोटहरू छनौट गर्न सावधान छन् जसले लाभदायक र सोचविचारित स offer्केत प्रदान गर्दछ।
वित्तीय लगानीको नियमित
लगानीकर्ताहरू लगातार आफ्नो पूंजी विविधता ल्याउन अवसरहरूको खोजीमा छन्। ट्रेडिंग रोबोट एक प्रविधि हो जुन यस प्रकारको प्रोफाइललाई बढि आकर्षित गर्दछ। वास्तवमा, जब यी लगानीकर्ताहरू राम्रो रोबोटहरू भेटिन्छन्, तिनीहरू पर्याप्त रकमहरू लगानी गर्न हिचकिचाउँदैनन्।
म किन मेरो मद्दत नि: शुल्क प्रदान गर्दैछु?
मेरो लक्ष्य भनेको तपाईंलाई प्रस्तुत गरिएको रोबोटहरू दर्ता गर्न सहयोग गर्दछ। मेरो साइट को माध्यम बाट, म केवल तिमीलाई ट्रेडिंग रोबोट देखाउँछु जुन मैले धेरै, धेरै हप्ताहरूको लागि विश्लेषण गरेको छु। अवश्य पनि, त्यहाँ सधैं जोखिम हुन्छ किनकि, हामीलाई याद राख्नुहोस्, प्रत्येक ट्रेडिंग रोबोट जोखिमपूर्ण लगानी रहन्छ र त्यसैले घाटा उत्पन्न गर्न सक्छ।
म तपाईंलाई सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछु तपाई स्वचालित ट्रेडिंगमा सुरूवात गर्नका लागि पूर्ण पारदर्शितामा। लक्ष्य भनेको तपाईंलाई थाहा छ जुन तपाईं आगमनमा कुनै अप्रिय आश्चर्य बिना तपाईं भित्र पस्न लाग्नु भएको छ।
मेरो सम्पूर्ण जीवनमा, म जहिले पनि मेरो वरपरका मानिसहरूलाई प्रगति गर्न दिनको लागि साझेदारी गर्न उत्सुक छु। यो साइटसँग थोरै उस्तै हो Robots-Trading.fr। मँ तपाईंको परियोजनाको विकासमा भाग लिइरहेको छु भन्ने कुराको सरल तथ्य मेरो लागि वास्तविक सन्तुष्टि हो।
ट्रेडिङ र क्रिप्टोकरेन्सीहरू 2017 देखि एक वास्तविक जोश बनेको छ। मैले यी नयाँ बजारहरू र तिनीहरूबाट प्राप्त हुने लगानीका नयाँ स्रोतहरूको विश्लेषण गर्न धेरै घण्टा बिताएँ। अब, मेरो लक्ष्य यो जुनून तपाईं संग साझा गर्न को लागी छ ताकि तपाईं यसको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
बिभिन्न ट्रेडिंग बट्सहरू हाल बजारमा भेटिए
आज त्यहाँ धेरै प्रकारका ट्रेडिंग रोबोटहरू छन्। यी रोबोटहरूको प्रोफाइल बजार घटनाक्रम अनुसार भिन्न हुन्छ। यसैले, केहि बजारहरू बरु स्थिर छन्, जबकि अन्यसँग अधिक स्पष्ट ट्रेंडहरू, अधिक अस्थिरता हुनेछ।
प्रवृत्ति तटस्थ व्यापार रोबोट
दायरा-प्रकारको व्यापारिक रोबोटहरू स्थिर र धेरै अस्थिर नभएका बजारहरूमा विशेष रूपमा केन्द्रित हुन्छन्। यी व्यापारिक रोबोटहरू प्राविधिक सूचकमा निर्भर हुन्छन् (मूल्यहरू कसरी विकसित हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गर्न स्टक बजार प्रतिभूतिहरूको विश्लेषणलाई अनुमति दिने बिन्दुहरूको अनुक्रम)। दायरा प्रकारको व्यापारिक रोबोटले यी प्राविधिक सूचकहरूलाई निरन्तर जाँच गर्नेछ र बजार ओभरबट वा ओभरसेल्ड हुँदा खरिद बिक्री गर्ने कार्यहरू गर्नेछ।
ट्रेंड निम्नको लागि ट्रेडिंग रोबोटहरू
यस प्रकारको ट्रेडिंग रोबोटले यसको प्रमुख प्रवृत्तिलाई पछ्याउने स्थितिहरू खोल्दै मार्केटमा जारी हुने ट्रेंडहरूलाई अवश्य भेट्दछ। यसैले, प्रत्येक चोटि रोबोटले यस्तो प्रवृति पत्ता लगाउँछ जुन लाभदायक हुन सक्छ, यसले खोल्छ वा बन्द पोजिशसन। नोट गर्नुहोस् कि यसले केवल खाता सिग्नलहरू लिन्छ जुन प्रवृत्तिको बिरूद्ध हुँदैन।
उच्च फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग रोबोट (THF)
तिनीहरू सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी ट्रेडिंग रोबोट हुन्। तिनीहरू प्रायः वित्तीय संस्थानहरू द्वारा बनाईएको हो। तिनीहरू केवल केहि सेकेन्डमा (अर्जेन्टि) अर्डर गर्न सक्षम छन्। उच्च फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंगको उद्देश्य साना नियमित उतार-चढ़ावहरूलाई शोषण गर्नु हो।